Ukuzonwabisa - UkuHamba koSapho | I-Seymour, IN | IZiko leNdwendwe laseJackson County
IJackson County ibonelela ngobumnandi obukhulu! Amahlathi amahle, indawo yokubalekela yezilwanyana zasendle kunye nendawo yolonwabo yombuso zibonelela ngeemayile zokuhamba, ukuhamba ngeebhayisikile ezintabeni kunye neendlela zokukhwela ihashe, kunye nokuloba, ukuzingela kunye namathuba enkampu. IJackson County likhaya kwiikhosi ezimbini zegalufa kunye neziganeko ezininzi zangaphandle zonyaka.
Cofa apha ukukhuphela i-BIKE Jackson County County "Phuma uhambe ukhwele" Imephu
Cofa apha ukukhuphela iJackson County Outdoor Rec Guide
Ukuzonwabisa kwangaphandle eJackson County, IN
IJackson County ihlala inezinto ezininzi zokuzonwabisa zangaphandle ezikhoyo. Kungakhathaliseki ukuba lixesha lonyaka, kukho into yokuhlangabezana nomdla womntu wonke.
Amahlathi kunye noLondolozo lweNdalo
Ngamawaka eehektare zamachibi, amahlathi, kunye nokugcinwa kwendawo, iJackson County yeyona ndawo ifanelekileyo kuye nawuphi na umthandi wendalo. Ukubonisa izilwanyana zasendle ezahlukeneyo ukusuka kwi-whitetail deer ukuya kwii-turkeys zasendle, yiza uhlolisise la mazwe akhuselweyo kwaye uthathe i-adventure kwicala lasendle. Amahlathi ethu kunye nolondolozo luya konwaba nokuba ujonge ukunyuka okanye ithuba lokuzingela nokuloba. Kwakhona, qiniseka ukuba ujonge iindlela ezininzi zebhayisekile kunye neendawo zokukhempisha ukuhlala ixesha elide. Ukukhupha kwaye uqhagamshele kwindalo njengoko bekufanele ukuba ube namava!
Ukunyuka intaba ngumsebenzi othandwayo kubahlali kunye nabatyeleli ngokufanayo kwiJackson County. Kungenxa yamathuba amaninzi kubakhweli bawo onke amanqanaba amava. Kukho iikhilomitha ezingama-50 zeendlela zokuhamba ngeenyawo kwiJackson County phakathi kweJackson-Washington State Forest, Muscatatuck National Wildlife Refuge kunye neStar Hollow State Recreation Area.
Ama-Anglers avela kuwo wonke ummandla agcwalisa amanzi aseJackson County ngalo lonke ixesha lonyaka. Ukongeza kumathuba okuloba kwiHoosier National Forest, Jackson-Washington State Forest, Muscatatuck National Wildlife Refuge kunye neStar Hollow State Recreation Area, iJackson County inemilambo emibini eyonwabisayo.
Umlambo i-East Fork White River ugeleza ngokunqumla kwiJackson County kwaye ubonelele ngeendawo ezininzi zokufikelela kuluntu lonke, olunokufunyanwa nqakraza esi sixhobo. Umlambo iMuscatatuck umda ngeelokishi zaseVernon naseWashington kunye neJackson neWashington Counties kwaye unendawo ezininzi zokufikelela kuluntu. Abo basebenzisa imilambo e-Jackson County bayacelwa ukuba bathathe yonke imiqathango yokhuseleko kwaye bafunde imigaqo phambi kokuqalisa. Funda ngakumbi ngo nqakraza esi sixhobo.
I-Kayaking yindawo yokuzilibazisa ekhulayo kwiJackson County uninzi lusebenzisa i-East Fork White River kunye noMlambo waseMuscatatuck njengendlela yokuphuma kunye nokuphonononga indalo. IiKayaks nazo ziyavunyelwa kwiHlathi likaRhulumente waseJackson-Washington, kwiNdawo yoLonwabo yeSizwe e-Starve kunye neMuscatatuck kaZwelonke yokuHlala kweZilwanyana. I-Starve Hollow ikwabonelela ngokuqeshisa i-kayak enokusetyenziselwa echibini layo ngexesha lohambo lwakho.
Ifoto umhlambi wee-cranes ze-sandhill ngexesha lokufuduka kwentwasahlobo ngonyaka njengeendawo ezininzi e-Jackson County ziindawo zokuphumla kweentaka. Hlola ukhozi olunobhabha xa lubhabha, jonga ii-otter zemilambo zigilana ematyeni, okanye ujonge amaxhama njengoko etya emaphandleni.
Uqinisekile ukufumana iindawo ezininzi zolonwabo lwangaphandle eJackson County!
IHemlock Bluff yoLondolozo lweNdalo
Ihlathi leLizwe leHoosier
Ihlathi likaRhulumente waseJackson-Washington / iSkyline Drive
I-Knobstone Glade yoLondolozo lweNdalo
IKlabhu yeGalufa yaseHickory Hills
Ibekwe kwiinduli ezijikelezayo zeJackson County, ikhosi inemingxunya esithoba ene-3,125 yeyadi yamadoda kunye ne-2,345 yabasetyhini ene-35 yezo zombini. Izixhobo zibandakanya ibha yokutya kunye nevenkile yokuthenga. IHickory Hills Golf Club ikwi-1509 S. State Road 135 eBrownstown.
Ifumaneka ngokufanelekileyo kufutshane ne-I-65, i-Shadowood inemingxunya eyi-18 nge-72 kunye neyadi ye-6,709. Izixhobo zibandakanya i-clubhouse, i-pavilion, ivenkile yokutya, i-pro shop, kunye neendawo zokuqhuba. IShadoodood ikwi-333 N. Sandy Creek Drive eSeymour.
Ukumisa amatye eJackson County, IN
Ukuba wena kunye nosapho lwakho nifuna indawo yohambo lwenu lwenkampu olulandelayo, iJackson County inikezela ngeendawo ezininzi ezintle ezilungele uhambo olufutshane okanye olude. Kungakhathaliseki ukuba uluhlobo luni lweenkampu onokuba nomdla kulo, iisayithi zethu ziya kukugubungela.
Iindawo zethu zokuzonwabisa kunye neepaki zibonelela ngeentlobo ezintathu zeekampu: iikhabhathi, iindawo zeRV, kunye neendawo zokuqala. Iikhabhathi zilungile kwabo bakhetha ukulala ngaphakathi okanye kwabo bangenayo intente okanye iRV. Iindawo zethu zeRV zibonelela iindwendwe ngendawo yokufikelela kumbane. Iinkampu zokuqala zenzelwe inkampu yesiko, kunye neentente kunye nokupheka ngomlilo ovulekileyo.
Amathuba enkampu yoluntu ayafumaneka kwi Ihlathi likaRhulumente waseJackson-Washington or Indawo yoLonwabo yeNdawo yoLonwabo.
Emva kokufumana indawo efanelekileyo yekampu, nwabele ukuhamba ngeenyawo kwiindledlana ezahlukeneyo ukusuka ekulula ukuya kwiindawo ezinzima kakhulu. Ukukhwela ihashe kufumaneka kwiindawo ezininzi ezinemvume yombuso, njengoko kunjalo ngebhayisikile yasentabeni. Ukuba ukuloba ku-ajenda, iJackson County ineendawo ezahlukeneyo onokukhetha kuzo kwaye inikezela ngeenqanawa, i-kayak kunye nerente. Iphepha-mvume likarhulumente liyafuneka. Ungalibali malunga nabo bazingeli kusapho. Ukuzingela kuvunyelwe kwiindawo ezahlukeneyo kunye nelayisensi efanelekileyo. Abadadayo kusapho baya kuluthanda ulwandle kunye namanzi kwindawo yoLonwabo yeStarve Hollow.
IMuscatatuck iLizwe lokuSebenzela iZilwanyana zasendle eSeymour, IN
Iminyaka, abahlali beJackson County kunye nabakhenkethi bonwabele ubuhle bendalo kwiMuscatatuck National Wildlife Refuge. Ngamawaka eehektare zemigxobhozo kunye nemimandla yehlathi, iindwendwe zinethuba lokufumana indawo enkulu ngaphandle ngendlela entsha. Indawo yokubalekela ikwi-US 50 kumgama omfutshane ukusuka kuHola wendlela wama-65 kwaye ifikeleleka ngokulula kwi-Indianapolis, eLouisville okanye eCincinnati.
Imisebenzi yoKhuseleko lweZilwanyana zasendle
Xa undwendwela indawo yokubalekela yezilwanyana zasendle eMuscatatuck, kukho imisebenzi yosapho lonke. Enye yezona ndawo zibalaseleyo zokubalekela, kwiindwendwe ezininzi, lithuba lokubona izilwanyana kwindawo yazo yendalo. Eli gwiba lilikhaya leentlobo ezingaphezu kwe-300 zeentaka ezifudukayo, kuquka nekhozi ezinobukhazikhazi ezihlala ezindle. Abantu bayakonwabela nokubukela ikholoni yasekuhlaleni yama-otters njengoko bezingela kwaye bedlala kwiindlela zokuphephela. Ngokubambisana nokubukela izilwanyana, iindwendwe ziyakonwabela ukuhamba ngeendlela ezibukekayo, kwaye zikhenketha iMyers 'Cabin, ebuyiselweyo, yokuqala yenkulungwane ye-20 kunye nekhabhathi, ephethwe yi-Myers Family. Ukuloba, ukuzingela, kunye nokufota kwezilwanyana zasendle kukwayimisebenzi eyaziwayo.
Indawo yokubalekela ikwabamba iminyhadala yaminyaka le kubandakanya iWings Over Muscatatuck, Usuku lweLog Cabin, Thatha usuku lokuloba abantwana, uSuku lweMigxobhozo, umsitho weSandhill Crane nezinye ezininzi.
Ulondolozo lwendawo yokuhlala
Indawo yokubalekela yezilwanyana zasendle iMuscatatuck yasekwa ngo-1966 njengendawo yokufuduka kweentaka ziphumle zize zondle. Umsebenzi wayo kukukhusela kunye nokubuyisela umhlaba kunye namanzi, ukuvumela iintaka, izilwanyana ezirhubuluzayo, izilwanyana ezirhubuluzayo kunye neentlanzi ukuba zikubize oko ekhaya.
Abaveleli abanemibuzo malunga neziganeko ezizayo, iindawo ezithile zolonwabo, okanye imisebenzi ethile kufuneka banxibelelane neMuscatatuck National Wildlife Refuge kuFacebook okanye batsalele umnxeba ku-812-522-4352.